"ကွီးရွှေနှင့် SHIBA"(2) - Neoxian City
ယနေ့ဆက်လက်တင်ပြမှာကတော့ ယမန်နေ့က တင်ပြခဲ့သော ကွိုင်အသစ်ကလေး SHIBA ၏ နောက်ထပ်အသစ်ထွက်ရှိလာသော မိုင်းဆိုက်ကလေးပါပဲ။
အွန်လိုင်းလောကမှာ တွေ့မြင်ရတတ်သည့် အသစ်အသစ်များ၏ဆွဲဆောင်မှု လမ်းကြောင်းအတိုင်း သူ၏ဆိုက်မှာ အကောင့်ဖွင့်ပါက အဖွင့်လက်ဆောင်ပေးသည်က $100နှင့်ညီမျှသော Dogecoinတို့အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပေးကာ မိုင်းနင်းအကောင့်အား စတင်လည်ပတ်ခွင့်ပေးပါတယ်။
Dogecoin mining by playing games with the Dogecoin infrastructure. Get $100 Dogecoin investment asagift for your first register.
အကောင့်ဖွင့်နည်းက လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ မိမိ၏ Email အားစာရင်းပေးခြင်း ဆက်လက်၍ မိမိ မေးလ်မှာ ဘယ်ရီဖိုင်းဆက်လုပ်ပေးရပါတယ်။ ထို့နောက် ဘယ်ရီဖိုင်းဖြစ်ကာ အကောင့်ထဲပြန်ဝင်လိုက်လျှင် မိမိကိုယ်ပိုင် ပါတ်စ်ဝါတ်များ ထည့်သွင်းခိုင်းပီး မိုင်းဆိုက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
မိမိအကောင့်ထဲရောက်သည်နှင့် ဆိုက်မှပေးထားသော $100တန် Dogecoinမိုင်းစက်ကလေး အလုပ်လုပ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဆန္ဒရှိပါက investment အရင်းနှီးထည့်ကာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အရင်းနှီး မထည့်သေးပဲ Freeရထားသည်မှ နေ့စဉ်အဝင်အားစောင့်ကြည့်နေပါသည်။
ဤမိုင်းဆိုက်ကလေးအား အကောင့်ဖွင့်ဖြစ်ပါက နေ့စဉ်လော့အင်အား တစ်ကြိမ်တော့ ဝင်ကြည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ မိမိစိတ်တိုင်းကျ အကောင့်ဖွင့်ခြင်းပီးပါက ရင်းနှီးငွေထည့်ခြင်းမပြုမီ 2FA Security ကိုတော့ လုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
မြန်မာဟိုက်ဗ်အဖွဲ့သားများ စိတ်ဝင်စား၍ အကောင့်ဖွင့်လိုပါက ကျွန်တော်၏ ဖိတ်ခေါ်လင့်မှ ဝင်ရောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
hive-122133 blog crypto proofofbrain neoxian trafficinsider creativecoin palnet archon leofinance
အလကားရတာပဲ ချသာချ။ 😃
Good တယ်ထင် ချဟ !PIZZA
သူဌေးဖြစ်သွားရင်လည်း မမေ့နဲ့ အုံးနော်....!PIZZA
သူဌေးဖြစ်ချင်နေသူပါဗျ ။ 😁😁😁 !PIZZA
@nyinyiwin(7/10) tipped @uthantzin (x1)
Free လုပ်တာပဲ အရှုံးမရှိပါဘူးလေ။ အားပေးပါတယ်ဗျာ။အခြေအနေကောင်းတာ ထူးခြားတာတွေ့ရင်တော့ လက်တို့ ပါအုံး အစ်ကို...!PIZZA
လက်တို့ပီးတော့ကို လာပြောပါ့မယ်😁😁😁 !PIZZA